PHOTOS. Bella Thorne, Lourdes, Emily Ratajkowski ...: xiddigoodhan oo moodaya in ay timaha tusayaan - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE PHOTOS. Bella Thorne, Lourdes, Emily Ratajkowski ...: xiddigoodhan oo moodaya inay timaha tusayaan
PHOTOS. Bella Thorne, Lourdes, Emily Ratajkowski ...: xiddigoodhan oo moodaya inay timaha tusayaan
2019, si aad xiddig ugu noqoto timaha, waa inaad ku fikirtaa ... timahiisa. Intooda badan ayaa sameeya: Lourdes Ciccone, gabadha Madonna, Bella Thorne, Gigi Hadid, Emily Ratajkowski, Paris Jackson, Miley Cyrus iyo Julia Roberts dhammaantood waxay go'aansadeen inay ciribtir timaha xanuun daran ee timaha xorta ah, si aad u sameysid amarada amarrada iyo inay si kibir ah u muujiyaan dhogortooda, gacmaha (iyo feedhi) oo kor loo qaaday. Lugaha lagama tago midkoodna: 2006, jilaayaha iyo majaajillada Mo Nique ayaa timohiisa lugaha ku tusay dhar gaagaaban oo rooga casaanka ah.
Farshaxanka kama soo bilaabmayo shalay, waxaan sidoo kale xasuusanahay Sophia Loren, 1955, oo soo bandhigtay timaheeda iyada oo aan wax xakamayn ah lahayn, Madonna 1984, ka dibna mar kale 2014, oo u soo bandhigtay gacantiisa koontada Instagram ee l. hawo, kilkilooyin si fiican u kaydsan. Ugu dambeyntiina, Julia Roberts, oo ku fadhida rooga gaduudan ee filimka hore ee filimka Jacaylka aragtida koowaad ee Notting HillIn 1999.
Aktarka ayaa markaa da 'ahaan ahaa 32 sano, daqiiqada ayaa ahayd mid aan dhiman oo sawirku wuxuu la xiriiraa xad-dhaaf, isagoo noqdey astaan ​​loogu talagalay dhammaan kuwa dhahaya jooji mandiqadda. "Waxay ila tahay inaanan xisaabinin dhererka timahayga, iyo sarajoogga kor u qaadida gacantayda ... Iyo inta ay labada wada joogi u muujin karaan waxyaabaha shaqsiyan aniga ahmar dambe ayay sirtay. Markaa ma ahayn fal ficil ah, laakiin waxay ahayd ficil taas loo oggol yahay in aan ka fekero cidda aan ahay, in aan si fudud nafsadeyda u noqdo. " Awood u lahaanshaha naftaada inkasta oo sheegashada quruxda aysan fiicneyn.
BESTIMAGE / KCS / INSTAGRAM
Bella Thorne, Lourdes, Emily Ratjkowski ...: Xiddigahaan ayaa qaata oo tusaya timahooda
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/mode/photos-bella-thorne-lourdes-emily-ratjkowski-ces-stars-qui-assument-et-affichent-1022287
Sawirada dharka dabaasha ee 'camilla swimsuit': "Nacayb iyo lugid & # 039; Berlusconi mag ayaa la weerarayaa inta lagu gudajiro clichés
Dadka: Jordyn Woods wuxuu soo bandhigayaa saaxiib cusub
David Beckham wuxuu ka mamnuucay wadista garoomada 6 bilood (UK) - ITV News - 9 May 2019 - VIDEO
Sacuudi Carabiya: Toban waxyaabood oo ay tahay in laga ogaado Abdelaziz Al Saud, Wasiirka Tamarta ee cusub - JeuneAfrique.com
Kongo: rasuulka Medard, dhakhaatiirta caadiga ah ee Ngunza ee jebisa shaashadda "Kongo" - JeuneAfrique.com
Gabon: Libreville waxay gacanteeda birta kaga guuleysatay kooxdii dhismaha ee Isbaanishka Eurofinsa - JeuneAfrique.com
DADKA & LIFESTYLE4,618